Ukubuyekezwa okujulile kwe-Superdrol (Methasterone) yokwakha umzimba
Konke okuphathelene I-Superdrol (i-Methasterone)
I-1. Iyini i-Superdrol (i-Methasterone)? I-2. Isilinganiso se-Superdrol
I-3. Umjikelezo we-Superdrol I-4. Imiphumela ye-Superdrol
I-5. I-Superdrol halflife I-6. I-Superdrol yokusika
I-7. I-Superdrol yokukhwabanisa I-8. Izinzuzo ze-Superdrol
I-9. Ukubuyekezwa kwe-Superdrol I-10. I-Superdrol edayiswayo
I-11. I-Superdrol yokwakha umzimba (isifingqo)
1. Iyini i-Superdrol (i-Methasterone)? Isebenza kanjani?
Kungenzeka ukuthi uke wakuzwa I-Superdrol (i-Methasterone) kusuka kubadlali, abakhi bomzimba noma noma ubani othanda ukubonakala okuthakazelisayo. Uma uke wazibuza ukuthi yiyiphi i-Superdrol (3381-88-2), funda lesi sihloko ku-ono futhi uzoqonda umjikelezo we-Superdrol, umthamo we-Superdrol, izinzuzo ze-Superdrol nakho konke okubandakanya le steroid yemilingo.
I-Superdrol (3381-88-2) eyaziwa ngokuthi i-Superdrol noma i-methyl drostanolone ingenye ye-anabolic androgenic steroid esebenza kahle kakhulu (AAS) eyenziwa ngomzimba kakhulu. Yakhiwe kuma-1950 kodwa ayikhishwe emakethe njengemithi yesiguli.
Nakuba i-Methasteron ngokwayo isele ibe yindawo engaphansi komhlaba, i-non-17a-alkylated engumlingani we-Methasteron ibilokhu emakethe ngaphansi kwegama elithi Masteron. Ngesikhathi esithile emuva, kwakukhona isithasiselo sokudla esibizwa nge-Superdrol ngoba sasineMethasteron.
Ku-2006 inqatshiwe yi-FDA naku-2012. I-Methasteron yayivinjelwe ngokuphelele ngakho-ke yifake ohlwini lwezinto ezilawulwayo njengazo zonke ezinye i-Anabolic Androgenic steroids.
Lokho akuzange kwenziwe i-Methasteron yanyamalala endaweni yesehlakalo. Sekuhlale kuthatha indawo ephezulu njengenye ye-steroid yomlomo enamandla kakhulu.
I-Superdrol (i-3381-88-2) isebenza ngendlela efanayo nezinye i-anabolic androgenic steroids. Umehluko nje wukuthi ukwakheka kwawo kuhlukile futhi kunikeza imiphumela esheshayo futhi emangalisayo.
Iqukethe i-hormone esebenzayo e-steroidal eyaziwa ngokuthi i-methyldrostanolone. I-dihydrotestosterone (i-DHT) engukushintsha kwe-drostanolone. Umehluko phakathi kwe-drostanolone ne-Superdrol ukuthi i-drostanolone ineqembu le-methyl elengeziwe elibekwe endaweni yeshumi nesikhombisa ye-Carbon. Leli qembu lenza ukuthi kungenzeka ukuba i-Superdrol ithathwe ngomlomo futhi ikwazi ukudlula isibindi sakho.
I-Superdrol ineqembu elilodwa le-methyl elitholakala endaweni yesibili yeCarbon futhi eyenza i-steroid ya-anabolic. Izinguquko ezincane ezivela ku-drostanolone zithinta imiphumela encane ye-androgenic e-Superdrol uma iqhathaniswa namanye ama-steroid anabolic. Umhlahlandlela Wokugcina We-Dianabol Wokwakha Umzimba
I-Superdrol isebenza ngokukhuthaza ukugcinwa kwe-nitrogen kanye namaprotheni synthesis. Inzuzo nayo yukuthi uma amaprotheni amaningi ehlanganiswa, futhi i-nitrogen igcinwe izicubu eziningi zomsipha zakhiwa. Ngokushesha izinga lokuhlanganisa kanye nokugcinwa, okusheshayo uya phezulu.
Ukusetshenziswa kwe-Superdrol kuholela ekuqhumeni kwe-oxygenation yezicubu zomzimba. Lapho uqeqeshwa, ama-microfibers akho adiliziwe, futhi ukukhula kwemisipha kuvela ngenxa yokuzilungisa. I-oksijeni engaphezulu kusho ukuthi bayabuyela ngokushesha futhi ngenxa yalokho, ungakwazi ukuqeqesha kanzima lokhu kukwandisa ubukhulu bemisipha yakho.
2. Isilinganiso se-Superdrol
Uma sikhuluma ngakho Isilinganiso se-Superdrol, kufanele sikhumbule ukuthi imigomo yomzimba ihlukile kumuntu nomuntu. Ngenkathi omunye angase afune ukuphakama, inhloso yomunye ingase ibe ukusika. Konke kuwo wonke umthamo we-Superdrol we-20-30mg cishe amasonto amane kuya kwayisithupha ukwanele ukukunikeza imiphumela eqondisiwe ngaphandle kokubeka impilo yakho engozini.
Iningi le-Superdrol abasebenzisi bathi ngaphambi kokukhetha umthamo we-Superdrol, kufanele ugcine ibhalansi elungile phakathi kokuzuza kwemisipha nemiphumela emibi. Ungahamba kuze kufike ku-40mg uma ufuna. Ngalesi sifo, uzothola ukuzuza okuningi kwemisipha kanye namandla ngaphandle kokukhohlwa imiphumela emibi ye-Superdrol. Akufanelekile.
Uma ukhetha ukuthatha i-40mg, akufanele uyisebenzise isikhathi esingaphezu kwamasonto amane. Ngemuva kwalesi sikhathi, isibindi sakho sizobe sisebenza ngokweqile kangangokuthi uma ungathathi ikhefu, ungaqeda ukuhlupheka ngezinkinga zesibindi. Ngemva kwamasonto amane, isibindi sakho sidinga ukuyibuyisela ukuze sikwazi ukusebenza ngendlela evamile.
Uma ngabe usebenzisa i-Superdrol yedwa, ungahlukanisa umthamo ube yizincane futhi uthathe kuwo wonke usuku. Ngokwesibonelo, ungaba nesinye ekuseni, esinye ngaphambi kokusebenza futhi isilinganiso sokugcina singasetshenziswa kusihlwa. Ngokwenza lokhu, uthola imiphumela embalwa emibi ngoba ukuthatha i-Superdrol kungabangela ukushintshashintsha kwamahomoni akho.
Ngokuvamile, umjikelezo we-Superdrol uthatha amaviki ayisithupha kuya kwangu-8. Njengomuntu oqalayo, ungaqala ngomthamo we-Superdrol we-10mg ngosuku ukuze uvivinye ubuzwe. Uma usubonile ukuthi umzimba wakho uphendukela kanjani kuwo, ungabe usanda kancane kancane umthamo. Umthamo we-Superdrol we-20mg ungaba olandelayo owathathayo. Uma usuzwe sengathi unolwazi olwanele, ungaqala ukuthatha i-30mg ngosuku.
Kulabo abakhetha ukufaka i-Superdrol (3381-88-2) nezinye i-androgenic anabolic steroids ezifana ne-Testosterone, ngesikhathi sokuqala kokusebenza yisikhathi esihle. I-10mg ilanele ukukunikeza izinzuzo eziphezulu ze-Superdrol.
Ngemuva kokugijima umjikelezo we-Superdrol, kufanele ube nomuthi wokujikeleza weposi. Ungenza i-PCT kusukela ngesonto lesihlanu kuya kwesishiyagalombili. Kuyasiza ekuvuseleleni impilo yomzimba wakho kanye nokujwayelekile izinga lamahomoni akho. Futhi, ungagwema imiphumela emibi engase ivuke ngenxa yokungalingani kwama-hormone.
4. Imiphumela ye-Superdrol
I-Superdrol (i-3381-88-2) inqobe izinhliziyo zabaningi ngenxa yemiphumela eyinikezayo. Uma ugijima umjikelezo we-Superdrol cishe amasonto amane kuya kwamasonto ayisithupha, cishe uzothola ama-lbs ayishumi emisipha. Ehlanganiswe nezinye i-AAS, uzobona imiphumela emihle kakhulu.
Imiphumela ye-3 yeviki ethatha i-20mg Superdrol 1 / 3 / 2019 27 / 3 / 2019
Isisindo 95.3 kg 100kg
Isikhumba 104 cm 104.5 cm
Inkabi (R) 38cm 40cm
Ithanga (R) 65 cm 67 cm
Amahlombe 133 cm 135 cm
Njengoba kubonakala etafuleni, imiphumela iyasabeka ngemuva kokugijima umjikelezo we-Superdrol amasonto amathathu kuphela. Isilinganiso esilinganiselwe se-20mg sisetshenzisiwe. Kusuka kwedatha etholakalayo, uyaqaphela ukuthi Ukukhwabanisa kwe-Superdrol umphumela ungcono kunaningi.
Ngaphezulu kwalokho, kwandisa amandla kakhulu. Ukukwazi ukuphakamisa ama-50lbs ngaphezulu ngesisindo oye waqeqesha nawo akuyona into esingayinaki. Lapho abantu bekhuluma ngezinzuzo ze-Superdrol, ngeke uphuthelwe ukuzwa ngamandla nobukhulu besayizi. Kuhlangene nokuqeqeshwa nokudla okulungile, awusoze waba nzima ukuzuza imigomo yakho yomzimba.
5. I-Superdrol halflife
I-halfdrol isigamu-impilo isukela emahoreni angu-8 kuya kwangu-9. Ngenxa yalokho, iphuma ohlelweni lomuntu ngokushesha kakhulu futhi yingakho idinga ukubala njalo. Ngokwenza lokhu, ungagcina izinga lokuhlushwa eliqinile emzimbeni.
6. I-Superdrol yokusika
I-Superdrol iyasiza ekuqothuleni amafutha ukuze unikeze umzimba ongcono futhi onzima. Uma imisipha yakho isakhiwe sonke, kuzodingeka usike ngoba ungaba namafutha amaningi ngaphansi kwesikhumba. Ngenhlanhla, i-Superdrol izokusiza ngaleyo ndlela njengoba iyanciphisa amafutha ngenkathi igcinwa emisipha.
7. I-Superdrol yokukhwabanisa
Kulabo abafuna ukubukeka behlaselwe, i-Superdrol iyinhlangano enhle kakhulu. Ngokukhuthazwa kokugcinwa kwe-nitrogen kanye neprotheyini synthesis, inikeza imiphumela emihle kakhulu. Kanye nokudla okunempilo kanye nohlelo oluphelele lokuqeqesha, kuzokusiza ukuthi ungeze kumisipha yakho.
8. Izinzuzo ze-Superdrol
Ukuba ngumakhi womzimba kudinga okungaphezu kokudla nokuzivocavoca okunamandla. Ngeshwa, lokhu kungase kungakuqinisekisi ngemiphumela ongayifuna. Ukusetshenziswa kwe-Superdrol kuyakwenza! Izinzuzo ze-Superdrol zikhulu futhi zibonakala futhi akumangazi ukuthi kuthiwa ungumfowabo omkhulu ka-Anadrol.
Nazi ezinye Izinzuzo ze-Superdrol;
Ukulahleka kwamafutha yi-craze entsha ezweni lomzimba. Kunemikhiqizo eminingi emakethe ethi ukusiza ngalokhu nakwabanye kusalokhu kungena ngaphakathi. Inkinga yukuthi akusiyo yonke into ephumelelayo futhi angeke ikusize ukufeza lokho okuhlosiwe. Ezinye zingakwenza ulahlekelwe isisindo ngokushesha kangangokuthi ushiywe isikhumba sokugcoba noma akukho imisipha.
Umgomo wakho omkhulu kufanele ulahlekelwe amafutha ngokunciphisa amafutha omzimba okweqile ngaphandle kokulahlekelwa imisipha yakho. Uma ulahlekelwa imisipha yakho, uba ukhululekile, futhi yonke imingcele yakho iyanyamalala.
Uma ucabanga ngokuchitha amaphilisi angeziwe, i-Superdrol kufanele ifike engqondweni yakho kuqala. Kungakhathaliseki ukuthi uzame ukudla, ukuqeqesha noma kokubili, kungenzeka ukuthi uthole ukuthi udinga okuthile okungeziwe. Ngenhlanhla, i-Superdrol ikusiza ukunciphisa isisindo ngempumelelo. Ngenye yemikhiqizo engathembeka. I-Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Umjikelezo, Imiphumela, Izinzuzo, Isilinganiso
Inzuzo nayo ukuthi inikeza imiphumela yemilingo ngokukusiza ukuba unciphise isisindo sakho ezingeni lakho elihle. Njengoba unamandla okulondoloza imisipha yakho, uzohlala unomzimba okhangayo kusukela ku-Superdrol izinsiza ekutshiseni amafutha ahlanzekile futhi akukho okunye okunye.
Akukho ukugcinwa kwamanzi
Bonke abakhi bomzimba, abancane noma abadala, bahlulelwa ukulinganisa kwemisipha, incazelo, kanye nosayizi. Ngenkathi umuntu enesichazamazwi esiphakeme semisipha, amazinga azo amafutha aphansi kakhulu. Nokho, ngezinye izikhathi incazelo ye-muscle ingancishiswa ngenxa yokugcinwa kwamanzi.
Amanye ama-steroids azokusiza ekutholeni imisipha emikhulu ewumphumela wokugcina amanzi. Ngokwethembeka, ngeke ufune ukubheka konke ukukhukhumeza ngenxa yokuthi unoketshezi oluningi. Uhlale ugxila ekudleni kwakho, ekuqeqesheni nasekuthathe isitifiketi sakho bese uketshezi okweqile kwakha ngaphansi kwemisipha yakho eyimali enzima. Uketshezi oludlulele akufanele kube isizathu sokuba imisipha yakho ibonakale ibukeka.
Izindleko ezinjalo ziyophela ngokushesha uma usuqedile ngesilinganiso sakho. Kuyinto nje yesikhashana futhi ingase ihambe ikushiye njengoba ukhona ngaphambi kokusebenzisa i-steroid.
Isici esisodwa esiyingqayizivele se-Superdrol ukuthi akubangeli ukugcinwa kwamanzi. Yingakho imisipha ibonakala iyindilinga, futhi imisipha iyamangalisa. Le steroid kufanelekile ukuthenga ngoba iyakwazi ukunikeza incazelo ephelele ukuthi izokuthola isikhundla sokuqala uma kwenzeka uhambela noma yikuphi ukuncintisana maduzane.
Okwamanje usuzwile ngezindlela ongakha ngayo imisipha yakho. Uma uqhubeka ufuna indlela yokufeza imisipha emikhulu, uzobe uthola okuningi okuningi, futhi yilokho lapho uqaphela ukuthi kunamasu amaningi kakhulu ahlukene. Abanye babo bazokushiya ukhululekile, udidekile futhi ucasuke. Yebo, nginezindaba ezinhle ngawe:
The Impumelelo ye-Superdrol yokukhwabanisa iphumelela kakhulu uma usuqunyiwe Thenga i-Superdrol powder, cishe ngeke ubuke emuva. Ngingasho ngokuzethemba ukuthi noma ngabe uzibiza ngokuthi ulinganiselwe noma awunayo imisipha, le steroid izokusiza ukwakha umzimba we-muscle owuthandayo onqwenelayo.
Njengoba kukhulunywe ekuqaleni umphumela we-Superdrol wokuqubuzela umphumela wendlela yokuthola amaprotheni amaningi kanye nokugcinwa kwe-nitrogen. Zombili zanda ngokweqile, yingakho I-Superdrol yokwakha umzimba ukuzuza kuzokuthola isihloko kokubili endaweni yokuzivocavoca nasemsebenzini wakho. Ngalokhu engqondweni, ngeke uhlale uzibuza ukuthi kungani imisipha yakho iqala ukukhanga ngosuku.
Ayikho imiphumela ye-estrogenic
Omunye wemiphumela emibi kakhulu eyenziwa yi-steroids yimiphumela ye-estrogenic. Ngokweqile, lokhu kusho ukuthi kukhona ukuguqulwa kokuthuthukiswa ngokobulili nokuzala komunye. Akekho umuntu ofuna ukuhlushwa yi-gynecomastia noma i-man boobs uma ezama ukuthola imisipha emikhulu. Kungenza ube namahloni futhi nesikhwama sokuhleka futhi. Le steroid iyakudinga ngempela ngoba imiphumela emibi ye-Superdrol ayifaki noma yimiphi imiphumela ye-estrogenic.
Njenge-steroid ya-anabolic, ngeke kudingeke ukuthi uthathe noma yiliphi i-anti-estrogen ndawonye uma unquma ukugijima umjikelezo we-Superdrol. Ngokungafani nezinye i-steroids ezingase zikushiye ngemiphumela e-estrogenic esabekayo, i-Superdrol izoshiya amazinga akho we-androgen aphansi kakhulu.
Ukwanda kwamandla nokuzivikela
Ayikho enye i-steroid engakunikeza ngezinzuzo eziningi njengezoMethasteron. Iba umbukiso ngokuthuthukisa ukwenziwa kwamaseli abomvu obomvu. Ngenxa yalokho, uthola amazinga angcono emzimbeni kanye nokuzivikela okungcono.
Ukubukeza ukubuyekezwa kwe-Superdrol, abantu abaningi bathi banomuzwa onamandla ngemuva kokusebenzisa i-Superdrol. Ukubuyisela nokukhuthazela kugqugquzelwa ngakho-ke ukuvumela ukuba uqeqeshe kanzima. Ukuthatha umthamo wesokudla we-Superdrol kuzokusiza uqede ukukhathala, futhi ungahlala uqeqesha kanzima noma kunini uma uzizwa uthanda. Akukuhle yini?
Njalo lapho ngizwa amalungu omzimba ekhuluma ngokufeza usayizi futhi hhayi amandla futhi, ngiyaxosha. Amandla yinto ebalulekile ekuqiniseni umzimba. Ngaphandle kokuwuthola, ngeke ukwazi ukuphakamisa izisindo okufanele uzinake ngazo. Uyabona ukuthi ngisho ukuthini ukuthi uma ufuna ukukhudlwana kunokuba uqale uqine futhi akukho enye indlela okuzungezile.
Abantu abaningi banesifiso sokuba nemisipha emihle futhi bakhohlwe ukuthi amandla yilokho okusiza ukuba wenze. Uma ufuna ukubukeka uqinile futhi usebenze njengalo, i-Superdrol yi-steroid kuwe. Kuzosiza imisipha yakho ukuba ikhule ibe namandla futhi inkulu ngesikhathi esisodwa.
Ukuxazulula ububha obambezelekile
Ngokuvamile, abanye abantu ngeke bafinyelele ukukhulelwa ngesikhathi esifanele. Ngokwesibonelo, abanye bangase babe nakho eminyakeni engamashumi amabili ngenkathi ubudala obufanele kufanele kube cishe no-13. Izici eziningi zingaholela kulezi zihlanganisa nezinkinga zemvelo phakathi kwabanye.
Njengoba i-steroid ijwayele ukulinganisa ukusebenza kwe-Testosterone, ukuthatha i-Superdrol kungasiza ekuxazululeni izinkinga zokukhulelwa. Ngenxa yalokho, umuntu angakhula, futhi umzimba wakhe kanye nokushayela ucansi kungathuthuka kakhulu.
Ukuba yisifo segazi esibonakaliswa ukubalwa kwesibalo segazi elibomvu, i-Anemia iyaphathwa ngokusetshenziswa I-Superdrol. Lokhu kungenxa yokuthi i-Superdrol kwandisa izinga elibomvu leseli legazi emzimbeni. Akumangalisi ukuthi imithi ye-anemia kuthiwa ine-steroids. Qaphela ukuthi ukwelashwa kwe-anemia, i-Superdrol kufanele ithathwe njalo.
I-Testosterone Alternative Therapy
Uma izinga le-Testosterone liphansi emzimbeni, i-Superdrol ingasetshenziswa ukuphatha ukungalingani. I-testosterone vs. ukungalingani kwe-estrogen kungabangela izinkinga emzimbeni wakho kuhlanganise nokwanda kwamafutha omzimba phakathi kwabanye. Ngokuphatha iMethasteron, imiphumela ingase ishintshwe kusukela le steroid ilingisa indlela Testosterone esebenza ngayo.
U-Ai uthi, "Le steroid ibonakala njengento engcono kakhulu engiyitholile kuze kube manje. Ngisebenzise ama-steroid amaningana amashumi eminyaka, futhi okwamanje, yilokho okuye kwangisebenza kimi. Ngemva kokuhluleka ukunginika imiphumela emihle, ngacabanga ukuthi kungase kube khona okungcono laphaya. Yiqiniso, i-Superdrol ihle kakhulu uma uhlose ukungeza ubukhulu besisindo. Ngifanele ngibonge i-buyaas.com ngokuyithengisa yona.
Ngiye ngithatha amaviki ayisithupha edlule ngingenzi ushintsho olukhulu emsebenzini wami wokuzivocavoca. Imisipha yami manje inkulu futhi ichaziwe; into engangiyicabanga ukuthi ngeke ivele kimi. Kuye kwakhipha i-abs yami ukuthi ngiyaziqhenya ngokuqeqeshwa ngesifuba sami konke. Uma uthatha noma iyiphi enye i-steroid ngaphandle kwe-Superdrol, khona-ke wenza konke akulungile. "
U-Bai uthi, "I-Superdrol ngumama wokubuyisa. Esikhathini esidlule, ngangizizwa ngikhathazekile kodwa ngingekho. Ngiye ngiyisebenzisela amasonto amathathu, futhi manje ngizizwa nginamandla kulo lonke usuku emsebenzini wami (ngisebenza endaweni yesakhiwo). Ngaphandle kwalokho, ngidlala namadodana ami kusihlwa ngaphambi kokushaya ukusebenza kwami.Konke Okudingeka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) ye-Bodybuilding
Ngiye ngifunda mayelana nama-steroids ahlukahlukene ngize ngihlale eSuperdrol kusuka ku-buyaas futhi konke engingakusho ukuthi ngiyabonga ngokuthi ekugcineni ngithole umkhiqizo omuhle kakhulu. O! Isevisi yamakhasimende ingaphezulu nangaphezulu. Ukukhulumisana kwabo kuwuphawu oluphezulu, futhi ngithole iphakheji lami kungakapheli isikhathi. Angikwazi ukusho ngokwanele ngalesi sayithi kanye nalo mkhiqizo. Kuyinto yebo kusuka kimi. "
UBohai uthi, "Ngisebenza iminyaka engaphezu kwengu-10 futhi ngizama cishe noma yini engena engqondweni yakho. Ngemuva kokugijima umjikelezo wokubhukuda, ngihlale nginenkinga yokusika futhi ngokuvamile, ngishiywe ngosayizi omkhulu ngaphandle kwemisipha ebonakalayo. Ngangicacile uma ngithenga lokhu kodwa nginezithemba eziphezulu kusuka ku Ukubuyekezwa kwe-Superdrol Ngifundile ku-intanethi.
Amandla ami nokukhuthazela sekukhuphukile kusukela ngiqala ukusebenzisa le steroid. Ngamasonto ambalwa engiwasebenzise, ​​ngiye ngaphawula ukuthi ngiye ngisondeza kakhulu futhi ngiyinkinga eminingi. Ngenkathi ngigcine isisindo enganginaso ngosuku olulodwa, amafutha omzimba wami anciphise ngo-3.4%. Ngibheka futhi ngizizwa ngingumuntu omusha futhi ngizibuka esibukweni; Ngiye ngakwesokunene ngizibuza ukuthi kungani ngingakaqali ekuqaleni. Ngingayifaka kunoma ngubani ofuna ukusika nokugcina imisipha yawo. "
U-Ying uthi, "Ngithenga i-Superdrol kusukela ekunconyweni komngane wami oyisibonelo. Ngangihlale ngifuna ukwenza isibonelo, kodwa ngangingaqiniseki neze ngomzimba wami. Ukuhlala emva kwedeski yami eminyakeni emihlanu edlule kunezele amanye umzimba emzimbeni wami owawube usayizi oyisibonelo.
Ngesikhathi sami esikhulu ekupheleni konyaka odlule, ngangingu-223. Ngemuva kwezinsuku ezingamashumi amane ngemva kokudla okuhlanzekile nokugijima umjikelezo we-Superdrol, ngiya phansi ku-199lbs. Le steroid ihlasela wonke umbala kufaka phakathi kokwenza imiphumela emibi. Angizange ngiqaphele imiphumela emibi ye-Superdrol kuze kube manje, futhi yilokho okwenza ngithande lo mkhiqizo nakakhulu. Umzimba wami uphindele emuva, futhi ngisanda kunqamuka futhi ngaqala ukwenza lokho engikuthandayo njalo okuyi-modeling professional. Izinzuzo ze-Superdrol ziye zangisiza ukuba ngiqede ukuba nomzimba owubuhlungu nje. Siyabonga Superdrol! "
10. I-Superdrol edayiswayo
Kufika isikhathi lapho wonke umakhi womzimba ezwa sengathi badinga okuthile okungeziwe. Ukusebenzisa i-steroids kuyindlela eqinisekile yokusheshisa ukukhula kwemisipha futhi ulahlekelwe amakhilogremu engeziwe uma lokho kungumgomo wakho. Abaqashi bomzimba abayena abantu kuphela okufanele basebenzise i-steroids, kodwa noma yiliphi i-goer ejwayelekile yokuzivocavoca ozizwa sengathi badinga ukunyakaza imizimba yabo ingahamba nayo.
I-Superdrol ingenye ye-steroids ethandwayo eyokunika i-bang buck yakho. Kuyisidakamizwa esilawulwayo, futhi ngeke ukwazi Thenga i-Superdrol powder noma kuphi. Ezimweni eziningi, ungadukiswa, futhi ungaqeda umkhiqizo ohlukile ngokuphelele. Ukuthola izandla kumkhiqizi othembekile we-Superdrol kungaba nzima kakhulu, futhi uma ungaqapheli ngokwanele, kungase kungabi yindlala.
I-intanethi yindawo enhle kakhulu lapho ungathenga khona i-Superdrol inthanethi ngaphandle kokuhamba nayo yonke inqubo yezitolo. Udinga kuphela ukuthola i-intanethi bese ubona umhlinzeki omuhle kakhulu we-Superdrol oyokunikeza imikhiqizo yekhwalithi. Kuzokuvimbela ekuthengeni umkhiqizo ongasebenzi noma owodwa ozolimaza impilo yakho.
Enye yezindlela eziphezulu zokuthola umhlinzeki omuhle ukuthola umuntu onokubuyekezwa okuhle kakhulu. Ukukhetha owathola izibuyekezo ezinhle kuzokusiza ukuxazulula inkinga yokufuna umphakeli ophelele we-Superdrol. Kusho ukuthi manje usungenza ingqondo yakho kuye ngokuthi yini abanye abantu abaye babhekana nomhlinzeki we-Superdrol.
Ukwengeza, uvumelekile ukuqhathanisa amanani phakathi kwabahlinzeki abahlukene ekududuzeni kwekhaya lakho. Ubani ongathandi ukugcina umbhangqwana wama-dollar? Kodwa-ke, kufanele uhlale ubheka amanani aphansi kakhulu asebenza njengesisulu kumakhasimende angenakubheka. Hamba ngomuntu onika izinga elijwayelekile elifanele umkhiqizo, futhi lokho akushiyi uphule.
Singumkhiqizi ongcono kakhulu we-Superdrol omkhiqizo wakhe okunikeza ukuphumelela kwekhono. Zonke izingxenye ku-Superdrol yethu ezithengiswayo ziphephile futhi zifakwe ohlwini ngencazelo yomkhiqizo. Uma uqala ukuwuthatha, awusoze waba nzima ukufeza imigomo yomzimba wakho.
Intengo yethu ye-Superdrol inengqondo, futhi iyakwazi ukukhokhela wonke umuntu kuhlanganise nalabo abasesabelomali - ukuhlela Thenga i-Superdrol ngobuningi? Sithole amadili best for you. Ukulethwa kwethu kunokwethenjelwa, futhi ungalindela iphakheji lakho esikhathini esifushane kunokwenzeka. Thenga namuhla futhi uthole izinga langempela le-Superdrol.
11. I-Superdrol yokwakha umzimba (isifingqo)
Njengoba kuboniswe kulesi sihloko, ukusebenzisa i-Superdrol kungakusiza ukuthi uthole isihloko somculi womzimba omuhle kakhulu. Noma ubani oye e-Superdrol ukwakha umzimba angasho kalula izingcindezi eza nazo. Eziningi izikhathi ozizwa uthanda ukuyeka ngenxa yokuthi ucabanga ukuthi awukwazi ukufika phezulu ngaphandle kokusetshenziswa kwezidakamizwa zokuthuthukisa. Ngenhlanhla, i-Superdrol kungasheshisa inqubo ekunika imiphumela emihle.
Ngokusebenzisa kwayo uhambo lwakho lokuvuselela umzimba ngeke lusabeke; emavikini ayisithupha alandelayo, uzokwazi ukuthola imiphumela ebonakalayo. Uma isetshenziselwa ukuhambisana nokudla okunempilo nokuqeqeshwa okunamandla, kuzokunika ukubukeka okukhazimulayo.
Ngaphezu kwalokho, kuboniswe ukuthi kuyasiza ekwelapheni izimo ezithile zezokwelapha ezivamile namuhla. Kodwa-ke, ukugwema ukulimaza umzimba wakho ngaphezu kwalokho ongakusiza, kufanele uthathe isilinganiso se-Superdrol. Okuncane kakhulu kungase kungakunikezi imiphumela engcono ngaso sonke isikhathi.
Ngesikhathi usebenzisa i-Superdrol, kubalulekile ukuthi uhlole ukudla kwakho ukuqinisekisa ukuthi uthola okuningi. Ukudla okuningi kokudla okuphezulu kwamaprotheni kungasiza ukusheshisa umphumela wokuguqula i-Superdrol. Futhi, ukunciphisa inani lama-carbs kanye nokudla okunampilo okungcolile okuthathayo kuyomisa Ukusika kwe-Superdrol Imiphumela.
Ukusebenza okuningi yilokho okuzokwenza imiphumela ye-Superdrol ibonakale kakhulu. Kuyadabukisa ukuthi abanye abakhi bomzimba bacabanga ukuthi ukuthatha i-Superdrol hhayi ukuqeqeshwa kuzokwenza umsebenzi ufezeke. Njengoba nje le steroid izosiza ekuthuthukiseni ukuthuthukiswa kwemisipha, akusho ukuthi kufanele uthole i-slacker ekuzivocavoca. Iqiniso liwukuthi kufanele usebenze ngokuphindwe kabili ngoba unamandla futhi manje usakwazi ukululama ngokushesha.
Thenga it namuhla futhi uphishekele inzuzo owake wawaphupha.
I-Sports Supplement Bible: I-Health and Fitness, By Will Brink, Ikhasi 302-307
Izithako Zokudla Kwezemidlalo Nokuzivocavoca, ehlelwe nguMike Greenwood, uMathewu B. Cooke, uTim Ziegenfuss, uDouglas S. Klman, uJose Antonio, ikhasi 13
I-Anabolic-Androgenic Steroids, ehlelwe nguCharles D. Kochakian, ikhasi le-374